Pireezidantoonni duraanii Itoophiyaa lamaan maaliitti jiru? - Kichuu
Hin jiru, Sharfee tokko! Hojii galii naa fidu miindaan hojjedhu hin qabu.
Homtuu na jalaa hin hafne. Mootummaan bayeessa na qabe jira.